> Resource > iPhone > Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Videos in an External Hard Drive
"Waxaan ku iibsaday qaar ka mid ah filimada ka Lugood Store si toos ah aan iPhone. Hadda waxaan u baahan tahay si ay u gudbiyaan, kuwaas oo videos ka iPhone in an drive dibadda adag tahay gurmad. Ma jiraan hab lagu waxan u samaynaysaan? Waan ogahay Lugood waxba kama qaban karto. I u leeyihiin in ay u hadda sababta oo ah videos, kuwaas oo qaadan meel aad u badan. baryayaaye, i sii talooyin Thanks. sameeyo! "
Waa hagaag, haddii aad rabto user ee kor ku xusan ayaa loo isticmaalaa iPhone sida qalab loogu daawashada cajaladaha, aad qabtid in ay u guuraan kuwaas videos ka iPhone oo bilaash ah ilaa meel dheeraad ah ee files cusub badbaadiyo. Oo waxaa meel fiican si loo badbaadiyo videos kuwaas waa drive dibadda adag. Si kastaba ha ahaatee, marka isku day in aad wareejiso videos ka iPhone in an drive dibadda u adag, waxaad ka heli karo in Lugood kaliya diido inuu u sameeyo. Xaaladdan oo kale, waa in aad ka heli shay muhiim ah in taas kuu sameeyo. Haddii kale, waxaad waxba ma aan samayn karo. Halkan waxaan jeclaan lahaa in aad ku talin Wondershare TunesGo, qalab xirfadeed si aad u hesho videos off iPhone in computer ama drive dibadda adag.
Download Wondershare maxkamad version TunesGo si uu u siiyo isku day ah!
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo (Windows) iyo TunesGo (Mac) versions maxkamad ayaa la bixiyey halkan kala soo bixi. Fadlan ka heli version saxda ah ee computer. The version Windows gaar ah taageertaa Windows PC orodka ee Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP iyo Windows Vista. The version Mac si fiican ula shaqaysaa wax Pro MacBook, MacBook Air, iyo iMac socda ee macruufka 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10,10 iyo 10.11.
Bedelka Videos ka iPhone in drive dibadda adag la TunesGo
Waxa kaliya qaadataa 3 simples tallaabooyin si ay u gudbiyaan videos ka iPhone in drive dibadda adag la TunesGo. Eeg tallaabooyinka hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Isku drive dibadda adag la computer
Connect aad drive dibadda adag la computer oo ka heli meesha ay tahay. Fadlan hubi in aad baabuur dibadda adag ayaa meel ku filan si loo badbaadiyo videos in aad ku socoto inay u dhoofiyaan ka iPhone.
Tallaabada TunesGo 2. Daahfurka
Burcad TunesGo iyo xiriiriyaan iPhone in computer via cable USB ay timaado la. TunesGo ogaan doonaa iPhone oo muujiyaan furmo suuqa hoose ay info aasaasiga ah, sida kartida iyo nidaamka qalliinka. Hadda macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7 ama 8 macruufka qalabaysan iPhone 6s (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, 5c iPhone, iPhone 4s iyo aad u badan yihiin si buuxda u socon.
Tallaabada 3. Transfer videos ka iPhone in drive dibadda adag
Riix tab Media dhinaca bidix ee suuqa ugu weyn. Ka dibna waxaad arki kartaa daaqadda ka soo booda la music, filimada, TV muujinaysaa, videos music, Podcasts, iwm riix Movies, TV muujinaysaa, Music Videos siday u kala horreeyaan in ay doortaan videos guji dhoofinta in My Computer ka dhoofinta in ay hoos-hoos liiska . Browse your computer u drive dibadda adag oo badbaadiyo videos.
Download TunesGo si ay u gudbiyaan videos ka iPhone in an drive dibadda adag hadda!